Ngubani umthengi wakho weB2B? | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 2, 2013 Douglas Karr
Sibona abaxumi bethu besokola rhoqo ngethoni yomxholo wabo… banenkxalabo yokuba umxholo wabo uphezulu kakhulu okanye awenzanga ngokwaneleyo kubaphulaphuli babo. Siyakholelwa ukuba uluhlu lwezinto eziyinkimbinkimbi lusebenza kakhulu. Abafundi bafuna umxholo wegunya eliphezulu skim ngaphaya komxholo onganomdla. Abagwebi inkampani okanye ukupapashwa, bayadlula nje kuyo. Umxholo osisiseko ngakumbi uya kuhlala ungundoqo kumathemba okuswela ukuqonda kweemveliso okanye iinkonzo zakho. Kwaye ukubhala umxholo ophezulu ngalo lonke ixesha kunokubeka imveliso yakho ngokungeyomfuneko kude kufikelele kwiimfuno zabo.
Abathengi bamashishini basebenzisa i-B2C yokuthenga izinto kwi-B2B transaction, oko kuthetha ukuba ababoneleli kufuneka banikeze amava ekujolise kuwo, asebenziseka lula kwi-intanethi. Uyamqonda umthengi wakho?
tags: b2bUmthengi we-b2bb2b umntu